Marayanka oo lacag dul dhigay hogaamiye katirsan hay’adda Taxriiru-Shaam. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Marayanka oo lacag dul dhigay hogaamiye katirsan hay’adda Taxriiru-Shaam.
On May 11, 2017 223 0
Dowladda Maraykanka oo hogaamineysa dagaalka ka dhanka ah Muslimiinta caalamka ayaa lacago malaayiin dollar ah waxay dul dhigtay hogaamiye sare oo katirsan hay’adda Taxriiru-Shaam.
Hogaamiyaha lacagta la dul dhigay waxaa lagu magacaabaa Sheykh Abii Muxamed Al-Jowlaani waana hogaamiyaha milliteriga ee hay’adda Taxriiru-Shaam oo ah jamaaco cusub oo dhawaan looga dhawaaqay Suuriya ayna ku mideysanyihiin dhowr Jamaaco.
Maraykanka ayaa sheegay in 10 Malyan oo doolar uu siin doono cidii soo sheegta halka uu ku suganyahay Sheekh Jowlaani, oo uu Maraykanka ku tirinayo inuu yahay sarkaal halis ah oo katirsan shabkadda Jihaadiga ee Al-Qaacida.
Lacagaha ay Maraykanka dul dhigaan saraakiisha Mujaahidiinta ah ayaa inta badan ah kuwa lagu doonayo in jawaasiis lagu helo, balse waxaa la ogaaday in Maraykanku uusan jawaasiista u shaqeysa siinin wax lacag ah, taas bedelkeedana waxaaba dhacda inuu ka takhaluso jawaasiistaas.